लहैलहैमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? जोखिममा पर्नुहोला नी – Himalaya Television
— रमेश लम्साल/रासस
२०७८ जेठ २५ गते २०:४५
२५ जेठ २०७८ काठमाडौं । के तपाई अरुले भनेको भरमा लहैलहैमा लागेर शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कमा पुगेको बेला राम्रो फाइदा हुन्छ भनेर कुनै पनि कुरा नै नबुझी हाम फाल्नु भएको छ ? यदि छ भने तपाईले कमाउने होइन, लगानी गरेको रकम समेत गुमाउन सक्नुहुन्छ ।
बजार लगानी शेयर